iOS 12 inowanikwa pane makumi masere muzana emidziyo yakatsigirwa | IPhone nhau
iOS 12 inowanikwa pa80% yezvigadzirwa zvinotsigirwa
Kana mwedzi mina nehafu yapfuura kubva pakaburitswa vhezheni yekupedzisira yeIOS 12, vakomana veCupertino vakaburitsa zvimiro zvepamutemo nezve kugamuchirwa kweiyi gumi nembiri vhezheni yeIOS pane yekuvandudza portal. Sekureva kwekambani yeCupertino-based, 83% yemidziyo yakatangwa mumakore mana apfuura inotarisirwa neIOS 4.
Sezvo Apple ichaburitsa iOS 12, yatanga kuratidza yekugamuchira dhata munzira mbiri. Kune rumwe rutivi tinowana chiyero chekutora chemidziyo iyo kambani yakatangwa mumakore mana apfuura, uye kune rumwe rutivi tinowana huwandu hwezvigadzirwa izvo nhasi zviri kutarisirwa neIOS 4, chimiro chinokwira kusvika ku12%, zvinoenderana nenhamba dzichangoburwa.
Ipo 83% yemidziyo yakatangwa mumakore mana apfuura inotarisirwa neIOS 4, chete 80% yezvose zvinoshandiswa zvinoshandiswa zvinotarisirwa neiyo imwechete vhezheni yeIOS. Pamidziyo iyi, 12% ichiri kutarisirwa neIOS 11 (imwe yedzidziso dzakaipisisa dzeIOS) nepo 8% yasara ichitarisirwa neshanduro pamberi peIOS 11.
Kubva munaNdira, Apple yakaburitsa iOS 12.1.3 uye iOS 12.1.4, pamusoro peiyo iOS 12.2, IOS 12.1.3, uye iOS 12.1.4 betas ye gadzirisa zvimwe zvikwata zvakaita sekufona kweboka kuburikidza neFaceTime. Iyo inotevera iOS yekuvandudza, nhamba 12.2, vhezheni iri parizvino iri mubeta, ichatipa kuenderana neterevhizheni inoenderana neAirPlay 2, new animojis uye ichawedzera Canada pakati penyika dzichakwanisa kunakidzwa neApple's News news service.
Kugamuchirwa kweIOS 12 kuri kukurumidza kupfuura iOS 11. Muna Kubvumbi 2018, iOS 12 yaive ichiri pa76% yemidziyo yakatsigirwa, pamwe nekuda kwenhamba hombe yematambudziko uye zviputi zvaisanganisira, izvo zvakamanikidza Apple kuti itarise kuvandudza mashandiro mune inotevera vhezheni, chimwe chinhu chakawana mune inopfuura inoshanda nzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » iOS 12 inowanikwa pa80% yezvigadzirwa zvinotsigirwa
Apple ichabatanidza yekutarisa yekurara muApple Watch